Amaphephandaba Aqhubeka Nokuzibulala Ngokungenasidingo | Martech Zone
Ngebhulogi kaRuth, ngisanda kuqeda ukufunda isiqeshana seNew York Times ku I-Tribune ihlela ukusika amakhasi angama-500 emaphephandabeni ayi-12 amakhulu isonto ngalinye.
Amaphephandaba = Iphepha Langasese
Angikwazi ngisho ukukutshela ukuthi lokhu kungiphatha kabi kangakanani ngobuhlanya okungenza ngibe… futhi, njengabathengi, nani kufanele niphatheke kabi ngokweqile. Kubukeka sengathi Imboni Yamaphephandaba, ngokuhlakanipha kwayo okuncipha ngokungenakulinganiswa, manje isiyalandela indlela eye yathathwa yimboni yamaphepha asendlini yangasese. Bathengisa amashidi amancane ngemali ethe xaxa kulezi zinsuku.
Inkinga ukuthi imikhuba yabantu yangasese ayikashintshi, kodwa imikhuba yabo yokufunda ishintshile. Izinkampani zeToilet Paper zingaphunyuka ngokuncipha kwemiqulu ngentengo efanayo - sisadinga ukuzithenga. Akunjalo emaphephandabeni.
Ukunciphisa ikhwalithi yomkhiqizo wakho akudingekile
Eminyakeni eyi-15 eyedlule ngangisebenzela iVirginian-Pilot futhi senza ukuhlaziywa okuningi kwemishini yokufaka enamandla kanye nezinye izakhiwo eziyinkimbinkimbi zokushicilela. Ubuchwepheshe, ngaleso sikhathi, abuzange bunikeze umvuzo ngokwanele ukwakha iphephandaba ngamandla futhi abuzange bunikeze ubuchwepheshe bokwakha iphephandaba elibhekiswe emakhaya.
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, bengisiza uScott Whitlock ukuphuma nge-blog yakhe futhi wangithatha wangihambela inkampani yakhe, I-Flexware Innovation. Ungibonise umshini othakazelisayo wokunyathelisa we-laser abebewakha onejubane elimangalisayo nokubekezelelana, akufani nomshini wokuphrinta noma umshini wokufaka.
Ukwenza amakhophi aqondene nomndeni kungaba yisikhuthazo emaphephandabeni ngoba angahlinzeka ngokukhomba okuqondene nomndeni ngokususelwe ekukhetheni kwabantu. Ngamanye amagama, izikhangiso ezingaphansi = imali ethe xaxa. I-Best Buy inganciphisa ukusatshalaliswa kwayo phakathi kodwa ishaye yonke imindeni ethanda isigaba seTekhnoloji. Ngabe bazimisele ukunciphisa ukusatshalaliswa kwabo kanye nezindleko zephepha ngama-50% kepha bakhokhe u-10% owengeziwe wokukhomba? U… yebo… kungabasindisa ngezigidi!
Ukungasho ukuthi lokhu kungaholela ekutheni amaphephandaba aze ancintisane ne-United States Postal Service.
Angikwazi ukucabanga ukuthi lolu suku nesikhathi, ukuthi akunakwenzeka ukuphrinta izigaba zakho bese wenza ngamandla iphephandaba ngokususelwa esicelweni somndeni. Cabanga nje ukuthi bekungaba lula kanjani ukusika izinkulungwane zamakhasi ephephandabeni lakho uma zingenazo izigaba obungeke uzithande! Uma ngingekho kwezemidlalo noma imibono yekhasi lokuhlela, mane usike!
Futhi, ukuhlungwa kwezinkampani kanye nokulethwa kuzoqinisekisa ukuthi iphephandaba lifika kuyo yonke imizi linembe kakhudlwana! Isithwali ngeke sidinge ukubheka itafula elithile lomzila, bavele badonse iphephandaba elilandelayo baliphonse emnyango ofanayo.
Inkinga ngalokhu, kunjalo, ukuthi akunjalo kulula njengokulahla nje inqwaba yamakhasi kanye nabasebenzi ababalulekile abalandelayo. Kudinga ukuguqulwa kwenqubo kanye nokutshalwa kwezimali okuphawulekayo kumathuluzi wokuphrinta nokusabalalisa adingekayo, mhlawumbe amakhulu ezigidi zamaRandi. Lokho kunciphisa umkhawulo wama-40% ujule kakhulu.
Umlayezo kaSam Zell ucacile - akathembi embonini yakhe ukuthi angashintsha noma abuyele emuva. Inothi kubanini bamasheya - lilahle.
Tags: a2isu le-facebookindlu yensimbiukuvumelanisa